Kulamo Xasaasi ah oo ka dhacay Villa Soomaaliya | KEYDMEDIA ONLINE
Kulamo Xasaasi ah oo ka dhacay Villa Soomaaliya
Marxaladda kala guurka ah ee dalku galay ayaa ku soo aadeyso xilli madaxda dowladda, mucaaradka iyo Dowlad Goleedyada ay qoorta iskula jiraan, iskuna fahmi la'yihiin doorashada.
Muqdisho, Soomaaliya – Madaxtooyada Soomaaliya ayaa xalay ka dhacay kulan xasaasi ah, kaasoo u dhaxeeyay Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullahi Farmaajo iyo qaar ka tirsan Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya.
Xildhibaanada la kulmay madaxweynaha oo tiradoodu gaareyso ilaa 100 mudane ayaa madaxweynaha la wadaagay walaacooda ku aadan go'aannada laga soo saaray shirka Dhuusamareeb ee la xiriira doorashadda dalka, kaasoo la filayo inuu madaxweynaha ka qeyb galo maalmaha soo socdo.
Mudanayaasha ayaa sheegay in aysan aqbalaneyn qorshaha madaxda maamul goboleedyada ee ku aadan baajinta nooca doorasho ay dowladda ku dhawaaqday oo ah qof iyo cod, isla markaana ay doonayaan in dalka doorasho dadban ka dhacdo, sida KEYDMEDIA ONLINE ay ogaatay.
Madaxweyne Farmaajo ayaa xildhibaanada ka balan qaaday in uu wixii go’aan ah ee laga soo saaro shirka Dhuusamareeb dib ugula soo laaban doono.
Guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo shalay ka hadlyay fadhiga Golaha Shacabka ayaa sheegay in maamul goboleedyada aysan go’aan ka gaarin nooca doorasho ee dalka, waxaa uuna intaas ku daray in dalku leeyahay gole sharci dejineed, kuwaas oo horey u ansixiyay sharciga doorashooyinka.
Hadalka Guddoomiye Mursal ayaa albaabka u furay jihada kale ee siyaasadda Soomaaliya oo maalmihii la soo dhaafay Madaxda maamul goboleedyada ugu bira tumanayeen Dhuusamareeb, ganafka ku dhufteen qorshaha dowladda ee haatan,
Si kasto, waxaa la filayaa in magaalada Dhuusamreeb ay isugu tagaan madaxda ugu sarreysa dawladda iyo dowlad goboleedyada, kuwaas go’aan rasmi ah oo is afgarad ah ka gaari doono doorashada dalka oo haatan nooceeda lagu jahwareersanyahay.